ज्ञानेन्द्र शाही माथी आ”क्रमण गर्ने जो सुकै भए पनि का’रबाही होस् ! रबि लामिछाने « गोर्खाली खबर डटकम
ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका युवाहरु माथी भएको आ’क्रमण निन्दनीय छ। असहमति भए त्यसलाई व्यक्त गर्ने अनेकौं तरिका छन्। तर भौतिक हमला कायरता भन्दा अरु केही होइन, का’रण जे होस्, जो होस्। वास्तविकता जे भएपनि अ’नुसन्धान गरि सा’र्वजनिक होस् , दोषी जो भए पनि का’रवाही होस्।
नेपालका लागि नेपाली अभियानता वा सामाजिक अभिया नता ज्ञानेन्द्र साही तिलक बस्नेत का लगायतका अभियान ता टिम जसले विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ सामाग्री निसुल्क बितरण गर्दै आइरहनु भएको छ । ताकी यो विषम माहामा रिमा कोहि पनि स्वास्थ बाट बन्चित हुन नपरोस भनी दिन रात नभनी खटिएका देसका सच्चा र सफा रास्ट्रभक्तीबोके का उदाउँदो युवाहरु हुन ।
हमला गर्ने ! केही पार्टीको छौराहरु माफिया दलालका पोछ्च्छरहरु जसले देसमा कु शासन गर्न र द्व’न्द ग्रस्त सोच बोकेका कुलङ्गारहरु जो अगाडिदेखि वार गर्न नसक्ने डुङी बाबाहरु हुन जसले न आफुले गर्छ नत अरुले गरेको नै मान्छ इनिहरु आफ्नै हाइकम जमाउन चाहाना बोकेका फाल्तु कुकुरहरू हुन ।भातेहरु …
ज्ञानेन्द्र साहिको मिसन /= खड्के र सेरे त्यसनाथि प्रचण्ड को( घु) शासन अन्त्य गरेर सुसासन कायम गर्ने । देसमा युवा रोजगारी को सिर्जना हुनुपर्छ । माफिया मेडिकल माफिया दलाल को अज्ञात समूह को अन्त्य हुनुपर्छ ! निसुल्क स्वास्थ ,शिक्षा ,हुनुपर्छ । देसको नागरिकहरुले अकालमै ज्यान गुमाउन नपरोस कसैलाइ शिक्षा बाट बन्चि त हुन नपरोस सबैले सम्मान पुर्बक बाच्न पाउनुपर्छ ।
केही आतंकबादी हरुलाइ मन नपर्न स्वभाविक नै हो किन की ग्यानेन्द्र साही सिङ्गो देसको एक असल र कर्मनिस्त्ट सपूत हो आतंकबादी को सपूत होइन अहिलेसम्म सरकार सामु मुन्टो गिराउनेले कान खोलेर सुन … सिङ्गो सरकार लाई ५/५ पटक मुद्दा लगाएका अहिसम्मकै पहिलो र एक साहसी युवा ज्ञानेन्द्र साही हुन ! जो आज करोडौं जनताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भएका छन ।